Codsiga - WY qiray Co. Ltd
Ball Ku marooji
Ball Ku marooji Loos
boolal Ball loo isticmaalo in cuntada iyo sharaabka, qalabaynta warshad, qalabka warshadaha, qalab mashiinka, warshadaha caafimaadka iyo Semiconductor ka faa'iideystaan ​​waxqabadka boolal kubada sax-dhulka.
WY qiray Co. Ltd
Factory is Systems
codsiyada nidaamka qalabaynta Factory keenidda WY qiray ka mid ah: Robots, technology Quudiyaha, qalabaynta-bixinta, baaraandegidda codsiyada Laser, nidaamyada qalabaynta Warshadaha, Kormeerka iyo nidaamka baaritaanka, Wiishka, nidaamyada shirka Automated iyo dhufto ee Ammaanka.
Automotive Korontada Actuation
In suuqa baabuurta, tiro badan baabuurta cusub hybrid iyo matoorada taagdarro shidaalka hoose iyo qiiqa hooseeyo Waxaa la soo saaray si loo yareeyo kaarboonka CO2 iyo in la sameeyo ay ka nadiifsan dhammayn. Isla mar ahaantaana, mashaariic badan oo lagu sameeyo si loo gaaro waxyaabaha baabuur weyn iyo driving ammaan ah adigoo codsanaya drives motor koronto degdeg ah oo lagu kalsoonaan karo isticmaalka boolal kubada
qalabka Imtixaanka keenidda alaabta mooshin toosan ka mid ah qalabka Semiconductor, Qaybaha for Semiconductor mashiinada wax soo saarka, shirkii Semiconductor iyo mashiinada baakadaha iyo maaraysay xabbad canjeero ah.
Xakamaynta mooshin toosan waa shuruud caadiga ah ee qalabka caafimaadka iyo qalabka shaybaarka, oo waxaa jira fursado drive toosan badan oo la heli karo. Si kastaba ha ahaatee, dabeecadda codsiyada caafimaad / shaybaar oo caqabado gaar ah, sida hubinta sax ah, lagu kalsoonaan karo, iyo dhaqdhaqaaqa noqnoqonaysa, taabato kala duwan ugu rarataan culaysyo firfircoon gudahood meelaha sii kordheysa yar; ka hawlgala deegaan nadiif ah oo u baahan xaddi yar ee burburka Duugga, iyo yaraynta buuqa, gariirka, iyo khalkhal farsamo si instrumentation inta lagu jiro hawlgalka.